Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiantohana M.A.M.A : miezaka manakaiky ny mpanjifa hatrany
Fiantohana M.A.M.A : miezaka manakaiky ny mpanjifa hatrany
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tetsy ami’ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka ny zoma 7 Febroary 2020 lasa teo ny masoivoho vaovaon’ny Fikambanam-piantohana M.A.M.A . Miisa 72 ny masoivohon’ity fikambanam-piantohana ity any amin’ny faritra ankehitriny raha 22 ny eto Antananarivo. Mahatratra 80%-n’ireo fiara mpitatitra manerana an’i Madagasikara no mpikambana eo anivon’ny MAMA. Voalazan’ny filohan’ny filan-kevi-pitondrana, Rolin, fa manana ny mampiavaka azy manokana ny Faikambanam-piantohana M.A.M.A, ary nanome toky hatrany izy fa ho mpirahalahy mian’ala ny mpitatitra sy ny fiantohana ka an-tsaha tsy mifanary ary an-tanàna tsy mifandao.
Miezaka manakaiky hatrany ny mpanjifa mpitatitra ny fiantohana MAMA, ary niroborobo izany nandritra ny fotoana nisahanany ny andraikitra maha-filohan’ny filankevi-pitondrana azy ao amin’ny foibe MAMA. Ny hanome fahafaham-po ny mpikambana no tanjona napetraka, hoy izy, satria iray vatsy iray aina ny roa tonta. Anisan’ny fanalana ny fahasahiranan’ireo mpitatitra sy fitsinjovana ny fotoana mety ho lany ary izay no antony nanokafana an-tsitrapo ity masoivoho eny Andohatapenaka ity. Tsy voatery hanatona ny foiben’ny MAMA intsony ny mpitatitra ao anatin’ny kaoperativa miisa 39 mampitohy ny lalam-pirenena RN1, RN2, RN4, RN5 ary ny RN6 izay manana ny fiantsonay ao anatin’ity tombin’i Maki eny Andohatapenaka ity fa ao ihany dia vita ny fandraharahana momba izany.
Nitso-drano ny orinasa mpitantana ny tombim-piantsonan’ny fiara sy ny fikambanam-piantohana M.A.M.A ny tale jeneralin’ny ministeran’ny fitaterana an-tanety. Misy ny fiaraha-miasa matotra amin’ny fampiroboroboana hatrany ireo ezaka hanatsarana ny tolotra hanaraka ny kalitao sy ny fenitra takian’izany.
Azo antoka fa hisy ny tombontsoa mihoatra noho ny teo aloha satria tsy ireo mpitatitra ao anatin’ny kaoperativa ihany no hisitraka ny fisian’ity masoivoho etsy Andohatapenaka ity fa ny olom-pirenena rehetra manana fiarakodia ihany koa dia ho afa-pahasiranana tanteraka.
Toy ny rano sy vary ka an-tsaha tsy mifanary ary an-tanana tsy mifandao ary toy ny mpirahalahy mian’ala ny mpitatitra sy ny fiantohana M.A.M.A